एनआइसी एसिया बैंकको नेपालमै पहिलो क्युआर कोड पेमेण्ट सेवा सुरु – Saurahaonline.com
एनआइसी एसिया बैंकको नेपालमै पहिलो क्युआर कोड पेमेण्ट सेवा सुरु
काठमाडौं, २१ साउन । एनआइसी एसिया बैंकले क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुले यो सेवा प्रयोग गर्न पाउने छन् । यो सेवा प्रयोग गर्नका लागि बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ । यसबाट क्युआर कोड जेनेरेट गरी त्यसमा स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्छन् ।
मर्चेन्टले भुक्तानी काउन्टरमा क्युआर कोड भएको स्टिकर पनि राख्न सक्छन् । जसलाई ग्राहकले मोबाइल एपको बिकल्प प्रयोग गरी स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न मिल्छ।
सेवा प्रयोगका लागि स्मार्ट फोन भने अनिवार्य छ । बैंकको एप गुगल प्लेस्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
हाल बैंकले २३४ शाखा कार्यालयहरु, २२४ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १६ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बैंकको वासलातको आकार १७४ अर्बको पुगिसकेको छ । बैंकको कुल निक्षेप डेढ खर्ब पुगेको छ भने ऋण सवा खर्ब हाराहारी पुगेको छ।
QR Code मार्फत भुक्तानी गर्नको लागि निम्न तरिका प्रयोग गर्नुपर्ने छ :
१. मर्चेन्टले Mo Bank मर्चेन्ट App बाट Request Payment विकल्प प्रयोग गरि QR Code generate गर्ने र ग्राहकले आफ्नो MoBank प्रयोग गरि सोहि QR Code मा MOPay विकल्प प्रयोग गरि Scan गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
२. मर्चेन्टले भुक्तानी काउण्टरमा QR Code भएको ] Sticker पनि राख्न सक्नेछन् जसलाई ग्राहकले MOPay विकल्प प्रयोग गरि Scan गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।